Kulan looga Hadlayay la Xisaabtanka Baarlamaanka oo Muqdisho lagu qabtay (Sawiro) | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Kulan looga Hadlayay la Xisaabtanka Baarlamaanka oo Muqdisho lagu qabtay (Sawiro)
Kulan looga Hadlayay la Xisaabtanka Baarlamaanka oo Muqdisho lagu qabtay (Sawiro)
Kulan Ku saabsan sidii loola xisaabtami lahaa Baarlamaanka oo ay soo qaban qaabiyeen Wargayska Xaqiiqa Times iyo Barnaamijka Wakiil ayaa lagu qabtay Huteel Jazeera ee magaalada Muqdisho.
Kulanka oo ciwaan looga dhiggay La-Xisaabtanka Baarlamaanka maadaama iyagu ay xukuumadda la xisaabtamaan ayaa waxaa ka qeyb galay xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Federaal ka ah ee Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen Xildhibaan Sharmaarke Garaad, Xildhibaan Cabdifataax Maxamed , Xildhibaan Samiiro Xasan Cabdulle iyo Xildhibaan Sulemaan Maxamuud Xaashi.
Kulanka ayaa intiisa badan diirada lagu saaray cidda ay tahay in ay la xisaabtaan Xildhibaannadda Qaranka iyo sidda ay u kala sareeyaan Hey’addaha sharci dejinta ee Baarlamaanka Sooamaliya.
Kulanka oo ay ka soo qeybgleen qaar ka mid ah bulshada rayidka iyo dhallinyaro ayaa su’aallo weydiiyay xildhibaannada. Su’aallaha ugu badan ee Xildhibaannada Baarlamaanka ayaa waxaa u badaneeyeen sidda iyaga loo xisaabtimi karo iyo cidda sharciyan la xisaabtamaysa.
Xildhibaanada ayaa waxaa ay ka dhawaajiyeen inay muhiim tahay in la qabto kulamada looga hadlayo la xisaabtanka Baarlamaanka ayagoo Wakiil iyo Xaqiiqa Times uga mahad cilin usoo jeediyay.
Xildhibaannada ayaa sidoo kale wax laga weydiiyay doodda Ku aadan isqabqabsiga ka taagan 8 -da kursi oo Baarlamaanka ka tirsan taasi oo Maxkamadda sare ay horrey u saartay amar ay ku laashay sharci ahaantoodda.
Xildhibaanada doodda ka qeyb galay ayaa sheegay in Baarlamaanka waajib uu ka saaran yahay ilaalinta xasaanadda Baarlamaanka sidaas darteedna ay isu hortaageen in 8-da kursi doorashadooda lagu noqdo maadaama xilkooda markii horeba maxkamadda Sare ay u dhaarisay.
Waxaa sidoo kale xildhibaannada kulanka ka qayb galay la weydiiyay qaabka xildhibaanka uu u gudan karo waajibaadka ka saaran danta qaranka iyo tan deegaanka laga soo doortay.
Hoos ka fiirso sawirada kulanka
Previous articleQM oo ka walacsan in guddiga dib u eegista Dastuurka aan Haween lagu so darin
Next article50 Tahriibayaal Soomaali iyo Itoobiyaan ah oo ku dhintay xeebaha dalka Yemen